BULSHO NEWS WEBSITE.
Mahad oo dhan waxa ay u sugnaatay allaah qalqay dhamaan uunka.
Maamulka boggan dayax waxa uu salamayaa dhamaan ummada soomaaliyeed meel walbo oo ay joogaan.
BULSHO NEWS waxa uu gacmo furan idinku soo daweenayaa bogga sida gaarka ah oo loo naqshadeeyay, adigane waxaad ku mahadsantahay sida ween ee qiimiga iyo qadarinta mudan ee aad tixgilinta usiisay bogga BULSHO NEWS.
BULSHO waxa uu xanbaarsanyahay macluumaad xiiso badan oo marnaba aringtadaada isha ayna ka dhergin, inta aad ku dhex jirtid BULSHO waxaad ku raali noqondoontaa booqashadaada iyo waqtigaada aad meel si heer sare ah ku bixisay waxaa jeceyl gaar ah u qaadi doontaa bogga sxbkaaga BULSHO, waxaa sidoo kale ka kororsankartaa aqoon iyo cilmi nafsadaada ku anfaca iyo waxaad si gaaar ah kaga aqrisankartaa taariiikhda dhulkaaga hooyo.
Qoraalada iyo boggaga isku dhex jiro waa kuwa layaableh oo naqshadii ugu danbeesay ah waxaa ka mid bogagaas Warar, chat, Member, Blog, Sawiro, Videos, Clander, iyo kuwa aad u badan kuwaas o dhamaantood macluumaad dhameestiran leh, weli maku dhibay Msn amaba qeebaha chatting-ka ee kala duwan hadaba adigoo sidaas howl dheer usii gelin ku balanso sxbkaaga amaba qaraabadaada joogto aduunka intiisa kale bogga halkaas oo aad si raaxo leh kuwada sheekeesankartaan adigoo wax culees ah dareemin insha allaah.
waxaa hubaal ah in aad ka heli doonto.
Kusoo gudbi E-mail-kan wixii faahfaahin ama su'al ama raýi ah dayax_3@hotmail.com , abukardayax@hotmail.com .
Waxaan kaaga mahadcelinyaa sida sharafta leh ee aad usoo booqatay boggan Dayax Media Network, Mahadsanid.
Ma u baahantahay in aad dhisto website, hadaba Dayax waxa uu kugu biirin karaa raýi wanaagsan, sidoo kale dayax waxa uu kaa caawin karaa in aad noqoto qof ku filan dhisida websites- caalami ah mahadsanid.
Cusmaan Cilmi Boqore " Waxa xildhibaanada Barlamanka laga doonayaa in ay doortaan gudoon cusub maadaama uu dhamaaday waqtigii gudoonka" Posted: 4/17/2010 5:41:00 PM BULSHO: ...